आइसल्याण्ड मा ज्वालामुखी: विशेषताहरु र विस्फोट | नेटवर्क मौसम विज्ञान
आइसल्याण्ड मा ज्वालामुखी
आइसल्याण्ड, बरफ र आगोको देश, एक प्राकृतिक स्वर्ग हो। हिमनदीहरूको चिसो शक्ति र आर्कटिक हावापानी पृथ्वीको विस्फोटक तापसँग द्वन्द्वमा छन्। नतिजा एकदमै सुन्दर परिदृश्यको अतुलनीय सुन्दरतामा शानदार विरोधाभासहरूको संसार हो। आइसल्याण्डिक ज्वालामुखी बिना, यो सबै असम्भव छ। को शक्ति आइसल्याण्ड मा ज्वालामुखी यसले यस भूमिको प्रकृतिलाई अन्य ज्वालामुखीहरू भन्दा राम्रो परिभाषित गर्न सक्छ, अनन्त काईले ढाकिएको लाभा क्षेत्रहरू, कालो बालुवाको विशाल मैदानहरू, र असहज पहाड चुचुराहरू र विशाल क्रेटरहरू सिर्जना गर्दछ।
त्यसकारण, हामी तपाईंलाई आइसल्याण्डमा ज्वालामुखीहरू र तिनीहरूका विशेषताहरू र महत्त्वहरू बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउन यो लेख समर्पित गर्न जाँदैछौं।
1 आइसल्याण्ड मा ज्वालामुखी
2 त्यहाँ कति छन्?
3 विस्फोटको आवृत्ति
4 आइसल्याण्ड मा ज्वालामुखी को खतरा
सतह मुनि ज्वालामुखी बलहरूले पनि देशको सबैभन्दा लोकप्रिय आश्चर्यहरू सिर्जना गरेको छ, जस्तै प्राकृतिक तातो मुहान र विस्फोटन गीजरहरू। थप रूपमा, विगतका विष्फोटहरूका प्रभावहरू सिनुस लाभा गुफाहरू र हेक्सागोनल बेसाल्ट स्तम्भहरूद्वारा बनेको चट्टानहरूमा देख्न सकिन्छ।
हजारौं मानिसहरू आइसल्याण्डको ज्वालामुखीहरू र तिनीहरूले सिर्जना गरेका चमत्कारहरू हेर्न र सिर्जना गर्न जारी राख्छन्। ज्वालामुखी विस्फोटको समयमा, हामी मौकाको लागि थप उत्सुक हुनुपर्छ पृथ्वीमा सबैभन्दा शानदार र अद्भुत घटनाहरू मध्ये एक हेर्नुहोस्। यो आइसल्याण्डको प्रकृति र उद्योगको प्रकृति र देशको प्रकृतिको लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, हामीले आइसल्याण्डको ज्वालामुखीहरूको लागि यो आधिकारिक गाइड कम्पाइल गरेका छौं, र हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईलाई सोध्न सक्ने सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ। यी ज्वालामुखीहरूको शक्ति।
त्यहाँ कति छन्?
आइसल्याण्डमा, लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी र निष्क्रिय ज्वालामुखीहरू छन्। टापु अन्तर्गत लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखी प्रणालीहरू छन्, पश्चिमी Fjords मा बाहेक, देश भर।
पश्चिमी Fjords मा अब ज्वालामुखी गतिविधि नभएको कारण यो आइसल्याण्डको मुख्य भूमि को सबैभन्दा पुरानो भाग हो, यो लगभग 16 मिलियन वर्ष पहिले गठन भएको थियो र त्यसपछि मध्य-एटलान्टिक दायराबाट गायब भएको छ। त्यसकारण, वेस्ट फजोर्ड्स देशको एक मात्र क्षेत्र हो जसलाई जियोथर्मल पानीको सट्टा पानी तताउन बिजुली चाहिन्छ।
आइसल्याण्डमा ज्वालामुखी गतिविधि उत्तर अमेरिकी र यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटहरू अलग गर्ने मध्य-एट्लान्टिक रिजमा सीधा देशको स्थानको कारण हो। आइसल्याण्ड विश्वका केही ठाउँहरू मध्ये एक हो जहाँ यो चट्टान समुद्री सतह माथि देख्न सकिन्छ। यी टेक्टोनिक प्लेटहरू भिन्न छन्, जसको अर्थ उनीहरु एक अर्काबाट अलग भएका छन् । त्यसो गर्दा, आवरणमा रहेको म्याग्माले सिर्जना भइरहेको ठाउँ भर्न र ज्वालामुखी विस्फोटको रूपमा देखा पर्नेछ। यो घटना पहाडहरूमा हुन्छ र अन्य ज्वालामुखी टापुहरूमा देख्न सकिन्छ, जस्तै अजोरेस वा सान्ता एलेना।
मध्य-एट्लान्टिक दायरा सबै आइसल्याण्ड मार्फत चल्छ, वास्तवमा अधिकांश टापु अमेरिकी महाद्वीपमा छ। यस देशमा त्यहाँ धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ आंशिक चट्टानहरू देख्न सकिन्छ, रेक्जेन्स प्रायद्वीप र Mývatn क्षेत्र सहित, तर सबैभन्दा राम्रो Thingvellir हो। त्यहाँ, तपाईं प्लेटहरू बीचको उपत्यकाहरूबाट हिंड्न सक्नुहुन्छ र राष्ट्रिय निकुञ्जको दुबै छेउमा दुई महाद्वीपका पर्खालहरू स्पष्ट रूपमा अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। प्लेटहरू बीचको भिन्नताका कारण, यो उपत्यका प्रत्येक वर्ष लगभग 2,5 सेन्टीमिटर फैलिन्छ।
आइसल्याण्डमा ज्वालामुखी विस्फोटहरू अप्रत्याशित छन्, तर तिनीहरू अपेक्षाकृत नियमित रूपमा हुन्छन्। XNUMX को शुरुवात देखि विस्फोट बिना एक दशक भएको छैन, यद्यपि तिनीहरू छिटो वा अधिक व्यापक रूपमा हुने सम्भावना एकदम अनियमित छ।
आइसल्याण्डमा अन्तिम ज्ञात विष्फोट 2014 मा हाईल्याण्ड्सको होलुहरानमा भएको थियो। ग्रिम्सफजलले 2011 मा छोटो विस्फोट पनि रेकर्ड गरेको थियो, जबकि सबैभन्दा प्रसिद्ध Eyjafjallajökull ज्वालामुखीले 2010 मा गम्भीर समस्याहरू निम्त्यायो। 'ज्ञात' शब्द प्रयोग भएको कारणले गर्दा यो हो। सन् २०१७ मा कतला र २०११ मा हेमेलिनलगायत देशका विभिन्न भागमा बरफको पाना नफुटेका विभिन्न ठाउँमा बहुचर्चित ज्वालामुखी विष्फोट भएको आशंका गरिएको छ ।
वर्तमान मा, आइसल्याण्ड मा ज्वालामुखी विस्फोट को समयमा मानव जीवन को खतरा धेरै सानो छ। देशभर छरिएका सिस्मिक स्टेशनहरू तिनीहरूको भविष्यवाणी गर्न धेरै राम्रो छन्। यदि कतला वा आस्कजा जस्ता ठूला ज्वालामुखीहरूले गड्ढेको संकेत देखाउँछन् भने, क्षेत्रमा पहुँच प्रतिबन्धित गरिनेछ र क्षेत्रलाई नजिकबाट निगरानी गरिनेछ।
पहिलो बसोबास गर्नेहरूको असल विवेकको लागि धन्यवाद, सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी बसोबास गर्ने न्यूक्लियसबाट टाढा छ। उदाहरणका लागि, आइसल्याण्डको दक्षिणी तटमा केही सहरहरू छन्, किनभने कतला र इजाफजाल्लाजोकुल जस्ता ज्वालामुखीहरू उत्तरमा अवस्थित छन्। किनभने यी चुचुराहरू हिमनदीको तल अवस्थित छन्, यसको विष्फोटले ठूलो हिमनदीको बाढी निम्त्याउनेछ, जसले महासागरको बाटोमा सबै चीजहरू बगाउन सक्छ।
यसले धेरैजसो दक्षिणलाई कालो बालुवाको मरुभूमि जस्तो देखाउँछ। वास्तवमा, यो हिमनदी निक्षेपहरू मिलेर बनेको मैदान हो।
आइसल्याण्ड मा ज्वालामुखी को खतरा
तिनीहरूको अप्रत्याशितताको कारण, यी हिमनदी बाढीहरू, आइसल्याण्डिकमा jökulhlaups, वा स्पेनिस भनेर चिनिन्छ, आइसल्याण्डको ज्वालामुखी गतिविधिको सबैभन्दा खतरनाक पक्षहरू मध्ये एक रहन्छ। माथि उल्लेख गरिएझैं, बरफ मुनि विष्फोटहरू सधैं पत्ता लाग्दैन, त्यसैले यी फ्ल्याश बाढी बिना चेतावनी हुन सक्छ।
निस्सन्देह, विज्ञान निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ, र अब, जबसम्म त्यहाँ असिना हुन सक्छ भन्ने अलिकति शंका पनि छ, तपाईले क्षेत्र खाली गर्न र निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, स्पष्ट कारणहरूको लागि, यो निषेधित सडकहरूमा ड्राइभ गर्न निषेध गरिएको छ, गर्मीमा वा कुनै खतरा छैन जस्तो लाग्दा पनि।
यद्यपि अधिकांश ज्वालामुखीहरू सघन आबादी केन्द्रहरूबाट टाढा छन्, दुर्घटनाहरू सधैं हुन्छन्। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, तथापि, आइसल्याण्डको आपतकालीन उपायहरू अत्यन्त प्रभावकारी साबित भएका छन्, जस्तै 1973 वेस्टम्यान टापुहरूमा हेमाईमा भएको विस्फोटमा देखियो।
हेमाई ज्वालामुखी द्वीपसमूह वेस्टम्यान टापुहरूमा मात्र बसोबास गर्ने टापु हो। जब ज्वालामुखी विष्फोट भयो, त्यहाँ 5.200 मानिसहरू बस्थे। जनवरी 22 को प्रारम्भिक घण्टामा, शहरको बाहिरी भागमा एक दरार खुल्न थाल्यो र शहरको केन्द्रमा सर्प भयो, सडकहरू ध्वस्त पार्यो र सयौं लाभा भवनहरू समात्यो।
यद्यपि यो राती अबेर र जाडोको मृत समयमा भयो, टापुको निकासी छिटो र कुशलतापूर्वक गरिएको थियो। एक पटक बासिन्दाहरू सुरक्षित रूपमा अवतरण भएपछि, उद्धार टोलीहरूले क्षति कम गर्न देशमा तैनाथ अमेरिकी सेनाहरूसँग काम गरे।
लाभा प्रवाहमा समुद्री पानीलाई निरन्तर पम्प गरेर, तिनीहरूले यसलाई धेरै घरहरूबाट टाढा पुर्ननिर्देशित मात्र गरेनन्, तर टापुको अर्थतन्त्रलाई सदाको लागि अन्त्य गर्दै बन्दरगाहमा अवरोध हुनबाट पनि रोके।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले आइसल्याण्डमा ज्वालामुखीहरू र तिनीहरूका विशेषताहरू बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » भूविज्ञान » आइसल्याण्ड मा ज्वालामुखी
प्राग खगोलीय घडी
आगो को औंठी